Abaphila ngobulile obubodwa bahlabe ukuncwasa umphakathi – Sivubela intuthuko Newspaper
ISIFUNDA, ILembe libungaze usuku olumqoka olumayelana nokugqugquzela ukungahlukunyezwa kwabantu abathandana nobulili obubodwa.
Lolu suku lubizwa ngokuthi yi-International Day against Homophobia, Interphobia, Biophobia and Transphobia ngamafuphi yi-IDAHBIT.
Eqinisweni nje lolu usuku oluvamise ukuthi lubungazwe umhlaba wonke ngomhlaka 17 May. Umbungazo lona weLembe ubukade uqhubeka ehholo lomphakathi lakwaDukuza, oGwini olusenyakatho yesiFundazwe, iKwaZulu Natal.
Ngalolu suku kubuye kwakhulunywa kakhulu ngokubaluleka kwemizamo eqinisekisa ukugwema ukucwaswa kwabantu abathandana nobulili obufanayo. Ukucwaswa kwabo kuvunyelwane ngokuthi kumele kuliwe kunqandwe kungaze kusabalele kugcine sekukapakela ezweni lonke.
Kuzokhumbuleka phela ukuthi eminyakeni ngu-31 eyedlule ngo-1990 inhlangano yezempilo emhlabeni nje jikelele iWorld Health Organization yathi ukusisona isifo ukuthandana kwabantu bobilili obobudwa. Kuzokhumbuleka ukuthi ngaphambilini ukuthandana kwabantu bobilili obufanayo kwakuchazwa njengesifo sabantu abangaphilile kahle engqondweni.
Nokho lokhu kwagcina kuguquliwe kwabhungwa kabanzi ngakho kwingqungquthela eyabe imqoka kakhulu neyathela izithelo ezinhle eyabe ingenyanga ka-August ngo-2005.
Kulo mbungazo weLembe bekukhona uMnuz Richard Mkhize onguSihlalo weCivil Society, uMnuz Patrick Mdletshe yena onguSihlalo walo mbutho, bekukhona noNkkk Nonhlanhla Mkhize onguMholi weLesbian, Gays, Bisexual, Transgender And Intersex ngamafuphi yiGBTI esiFundazweni.
Bonke bebesho ngazwi linye bevumelna ngokubaluleka kokuhlonishwa kwabo bonke abantu kungakhathaleki ukuthi baphila hlobo luni lwempilo futhi bayiliphi ibala.
Amalunga omphakathi wesiFunda iLembe awazange aphoxe njengoba ebephume ngobuningi bawo bezolalela futhi bezofunda okuningi obekukhulunywa ngaleli langa.
Kuzokhumbuleka ukuthi ngo-October 2014 kwaba nomhlangano wokubhunga kabanzi ngamalungelo abantu abathandana nobulili obufanayo. Kwaphinde kwathulwa nezethulo okwasetshenzelwa kuzona. Okunye okwakuseqhulwini kwaba ukuhlukunyezwa kwabo kanye nokubulawa kwabo.